Maungtintyin: အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုကို ဆန်းစစ်ပါ
ဒို့တတွေ နားလည်ထားတာက အောင်မြင်ဖို့ဟာ ဆိုက်ရောက်ဖို့ ဖြစ်တယ်- တစ်နေရာရာ အရာရောက် ဖို့ ဖြစ်တယ်- ဆိုတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဒို့တတွေက အောင်မြင်မှုကို မြတ်နိုးကိုးကွယ်ကြပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်က သန်းကြွယ်သူဋ္ဌေးအမျိုးအစား တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ကြီးပြင်းရှင်သန် လာတဲ့ အခါ- ပုံမှန်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က တစ်နေ့မှာ ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ- သူဟာ အောင်မြင်ခြင်း အတွက် အောင်ပွဲခံပါတယ်။
အောင်မြင်မှုဟာ အကြွင်းမဲ့လား? ဒါမှမဟုတ် အဲဒါက ငါတို့တတွေ လက်ကိုင်ပြုတဲ့ အိုင်ဒီယာတစ်ခုလား? အကြောင်းမှာ တစ်ဦးက “ရောက်ရှိတဲ့” အခိုက်- တစ်ယောက်က အရင် ရောက်ရှိရဦးမယ့်- ရှေ့မှာကြိုတင် ၍ နောက်ထပ် အချက်တစ်ခု အမြဲတမ်း ရှိပါတယ်။
အောင်မြင်မှုကို ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ရာမှာ- ဒို့တတွေဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပဋိပက္ခတွေကို ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံကြရပါတယ်။ အောင်မြင်မှုကိုလိုက်စားခြင်းဟာ “ပို၍ နောက်ထပ်”အတွက် အလိုဆန္ဒ ဖြစ်ပါ တယ်။ “ပို၍ နောက်ထပ်” အတောမသတ် ထပ်ကာထပ်ကာ တောင်းဆိုနေတဲ့ စိတ်တစ်ခုဟာ- ဆက်စပ် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အသိညဏ်ဆိုင်ရာ စိတ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါ။
အဲဒါနဲ့တစ်ခြားစီပြောင်းပြန်- သာမညောင်ညအဆင့် မည်ကာမတ္တအဆင့်- မိုက်မဲတဲ့စိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းက “ပို၍ နောက်ထပ်”အတွက် သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုဟာ- အဲဒါအတွက် လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ် ပြီး တဲ့- စံနမူနာများအရ- အဆက်မပြတ် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကို သွယ်ဝိုက်ညွှန်းဆိုပါတယ်။
အားမရခြင်းဟာ “ပို၍ နောက်ထပ်” စွဲမက်တောင့်တမှု ဖြစ်ပါတယ်။ အားရကျေနပ်မှုကတော့ အဲဒီရုန်းကန် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ရပ်နားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ “ပို၍ နောက်ထပ်” နဲ့ပတ်သက် လို့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကို နားလည်ခြင်းမရှိဘဲ- ပြီးတော့ စိတ်က ဘာ့ကြောင့် အဲဒါကို တောင်းဆိုသလဲ- ဆိုတာ နားလည်ခြင်းမရှိဘဲ- ကျေနပ်အားရမှုရဲ့ အခြေအနေသို့ မလားရောက်နိုင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့် သင်ဟာ စာမေးပွဲကို ကျရှုံးလျင်- သင် အဲဒါကို နောက်ထပ် ပြန်ဖြေလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာမေးပွဲနှင့် သင့်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုဟာ သူတို့ချည်းသတ်သတ် သူတို့အနေနှင့်- သင့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ ထိုက်တန်မှုကို တကယ် ပြသလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါ။ စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခြင်းဟာ အဓိကအားဖြင့် ဦးနှောက်ပိုင်း ဆိုင်ရာရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒါက အခွင့်အရေးတစ်ခုရဲ့ အကြောင်း တရား တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်ဟာ သင့်ရဲ့စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးပမ်းပါတယ်။ နောက်ပြီး သင်ဟာ မအောင်မြင်လျင် အဲဒါကို အားမလျှော့ဘဲ ဆက်လုပ်ပါတယ်။
ဒါက ငါတို့တတွေများစွာအဖို့ နေ့စဉ်ဘ၀မှာ တူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒို့တတွေဟာ အချို့အရာတွေ ကို အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒို့တွေက အဲဒါနဲ့ စပ်ဆက်နေတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာ မှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်သလား ဆိုတာ- ဒို့တွေဟာ စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့ ဘယ်သောအခါမှ ဆိုင်းငံ့ရပ်နားထားတာတော့ မဟုတ်ပါ။
ဒါက အောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုအရ တွေးခေါ်စဉ်းစားတာကို- ဒို့တတွေ ရပ်စဲတဲ့- “ပို၍ နောက်ထပ်” လိုချင်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု မပါမှုကို- ဒို့တတွေ နားလည်သိရှိပြီးတဲ့အခါမှသာလျင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒို့တတွေအားလုံးဟာ စာမေးပွဲမှာသာမက ဘ၀မှာပါ ကျဆုံးတာ- ပြီးတော့ အမှားလုပ်မှာကို အလွန် ကြောက်ကြ ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ငါတို့တတွေကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်- အမှားအယွင်း တစ်ခု ပြုလုပ်တာကို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတာအဖြစ် ယူဆကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒို့တတွေဟာ အမှား အယွင်းတွေ ပြုလုပ်မှာကို ကြောက်ရွံ့ လျင်- ဘယ်သောအခါမှ ဒို့တွေက သင်ယူလေ့လာခဲ့ လိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။
အောင်မြင်မှုရဲ့အကောင်းဆုံးကို လိုက်ပါဖို့ ငါ့တို့တွေအတွက် နောက်ကျသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ အောင်မြင်မှုဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုအရ အမြဲတမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အောင်မြင်သူများလို့ ခေါ်ဆိုရတဲ့ သူတော်စင်များ မှာတောင်- ဂုဏ်သရေသိက္ခာ ရှိလာရပါ့မယ်။ သို့မဟုတ်လျင် သူ့မှာ အသိအမှတ်ပြုခြင်း - ပြီးတော့ ထောက်ခံ သူနောက်လိုက်များ ရှိမှာ မဟုတ်ပါ။
ဒါ့ကြောင့် ဒို့တတွေဟာ အောင်မြင်မှုအရ- “ပို၍ နောက်ထပ်”အရ အမြဲတမ်း တွေးခေါ်စဉ်းစားနေ ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ “ပို၍ နောက်ထပ်”ဟာ ခေတ်စားနေတဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများက ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ အရာအပေါ်မှာ- နှိုင်းယှဉ်ပတ်သက် အကောင်းဆုံး တည်မှီနေ ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ အဲဒီအသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးနှင့် လျော်ညီအောင် မနေထိုင်လျင်- သင့်ကို အောင်မြင်ခြင်းလို့ ခေါ်ဖို့ အလားအလာ မရှိတော့ပါ။
ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအားလုံးနဲ့ အချို့အရာဝတ္ထုတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်လျင်- ဒီနောက် သင်ဟာ အောင်မြင်မှု ကျရှုံးမှုနှင့် မသက်ဆိုင်တော့ပါ။ သို့သော်လည်း ဒီလမ်းကြောင်းကို စဉ်းစားတွေးခေါ် ဖို့ နေရာ- သူတို့ကို ခွင့်ပြုလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ မြင်ကွင်းက တကယ့်ကို အနည်းငယ် မှာပဲ ရှိကြပါတယ်။
အသိပညာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှု အလေးထားစရာတစ်ခုလုံးဟာ- သူတို့ ဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်း အရာဝတ္ထုတွေကို မြင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပြဿနာ ( အောင်မြင်မှု ဒါမှမဟုတ် ကျရှုံးမှု ကို ဇောင်းပေးခြင်း အရ- တစ်တန်းတစ်စားတည်း ထားရှိတဲ့ အပြုအမူများနဲ့ပတ်သက်လို့ သေချာ ပေါက် မဟုတ်တဲ့- ပြဿနာ) ကို သိရှိနားလည်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက အဲဒီ ဝေါဟာရသတ်မှတ်ချက်များအရ ဒို့တတွေ စဉ်းစားတွေးခေါ်တဲ့- ဒို့တတွေ ပြုလုပ်နေတဲ့အရာကို- တကယ် ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်း မရှိတော့တဲ့အခါမှသာလျင် ဖြစ်ပါတယ်။ “အောင်မြင်မှုဟာ နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ ကိန်းစဉ်တန်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အကြွင်းမဲ့ဧကန် မရှိ” ဆိုတာ ပညာရှိ တစ်ယောက် ယောက် က ပြောဆိုခဲ့ပါသလား?
အောင်မြင်မှုလို့ ယနေ့ ဒို့တတွေ တွေးခေါ်ယူဆနေတာတွေက- အခြားအချိန်ကာလမှာ အခြေအနေတစ်ခု မှာ ကျရှုံးမှုအဖြစ် စဉ်းစားသုံးသပ်ကောင်း သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ပါပဲ။
နှိုင်းယှဉ်ထားတဲ့ အခြေအနေများ ဖြစ်သည်အားလျော်စွာ- အောင်မြင်မှုနဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုလို့ ငါတို့တတွေ ခေါ်ဆိုတဲ့ အရာနှစ်ခုလုံးကို ရှု့မြင်ကြည့်ဖို့- ငါတို့တတွေရဲ့ အကောင်းဆုံးစိတ်ဝင်စားမှုကပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြင့် တုန်လှုပ်မှုကင်းခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှု ကျရှုံးမှုနှစ်ခုလုံးကို ပြုစုဆက်ဆံပါ။